Man United oo maaliyadeeda oo saxiixan u soo dirtay nin xabsi ku jiray 5-sano…(Maxay tahay sababta ay ugu soo dirtay, halkuuse ku xirnaa?)+SAWIRRO – Gool FM
Man United oo maaliyadeeda oo saxiixan u soo dirtay nin xabsi ku jiray 5-sano…(Maxay tahay sababta ay ugu soo dirtay, halkuuse ku xirnaa?)+SAWIRRO
(Pakistan) 15 Juunyo 2016. Ninka reer Pakistan oo u afduubnaa xarko islaami ah ku dhawaad shan sanadood ayaa maaliyad saxiixan ka helay kooxda Man United.
Kooxda reer England ayaa ninkan lagu magacaabo Shahbaz Taseer u dirtay maaliyadeeda kaddib markii uu shaaca ka qaaday inuu ku bogsoon jiray oo miirkiisa soo laaban jiray marka uu dhageysto tabinta kulamadeeda intii uu xirnaa.
Mr Taseer ayaa waxaa magaalada Lahore k afduubtay niman qoryooley ah bishii August ee 2011 isagoo markaa u socda shaqadiisa waxaana la soo daayay bishii March ee dhawaan.
Bishii la soo dhaafay wuxuu tilmaamay sida loo jeedaleyn jiray, darbeyn jiray iyo inay qafaalatada ka siibi jireen cidiyaha.
Laakiin miirka kama uusan tagi jirin oo wuxuu ku bogsoon jiray dhageysiga tabinta kooxda uu jecelyahay ee Man United oo uu ka maqli jiray mid ka mid ah ilaaladiisa marka uu shito.
“Waxay ii ahayd aniga daaqad aan kala socdo caalamka banaankiisa, helista aqbaarta kubbada cagta ayaa miirka ii celineysay,’ Taseer ayaa sidaa u sheegay jariiradda Daily Times ee Pakistan.
“OMG Man United ayaa ii soo dirtay tan!!!!, lama filaan ayay ila tahay, mahadsanidiin xarfaaney.” Sidaa ayuu Taseer ku soo qoray boggiisa Twitter marka uu helay hadiyadii Man United.
Tan iyo sidii loo soo daayay, Mr Taseer iyo xaaskiisa ayaa soo dhigayay waxyaabo cusub Twitter ka oo ku saabsan sida uu dib ula qabsaday nolosha caadiga ah.
Bilooyin ka hor inta aan la afduuban, aabihiin Salmaan Taseer ayaa waxaa toogtay ilaalihiisa horaantii 2011 isagoo ka soo horjeeda shuruucda dalka ee gaaleenta taa oo dhaleeceeyayaasha ay ku bartilmaameedsanayeen dadka diinta looga tiro badan yahay.
Ma cadda ilaa hadda xaaladaha dhabta ah ee loo soo daayay Mr Taseer.
Wuxuu CNN u sheegay in dhaq-dhaaqaaqyada Islaamiga ee Uzbekistan ay doonayeen inay u isticmaalaan isaga isdhaafsi maxbuus, mar intaa ka dambeysayna wuxuu sheegay in la soo daayay kaddib caawimaad uu ka helay mid ka mid ah kuwa ugu sar sareeyay xarakada mana uusan sharaxin sababta.
Horaantii sanadkan, kabtanka xulka Argentina Lionel Messi ayaa labo maaliyadood u diray wiil reer Aghanistan kaa oo qabsaday baraha bulshada markii lagu sawiray BAC laga sameeyay maaliyad xulka Argentina isla markaana gadaal looga qoray qalin Messi iyo lambarkiisa tobanaad.